Diiwaanka Dhagaxa Sweden | Booqo Hultsfred
Bogga hore » 🥾 arag oo samee » 🎟️ Soo jiidasho » 🖼️ Matxafyada & bandhigyada » Diiwaanka Rock Rock
In ka badan nus milyan walxood oo la xidhiidha muusiga caanka ah ee Iswidhishka. Halkan waxa aad ka heli doontaa cajalado, boodhadhyo, cajalado muuqaal ah, buugaag, waxyaabo xiiso leh - iyo dharka asalka ah ee Kurt Olsson!
Arkiifiyada Iswiidhishka ee loo yaqaan 'Rock Rock Archive' waa urur iyo arji muusig ujeedadiisuna tahay in lagu soo ururiyo taariikhda muusikada caanka ah ee Iswiidhan. Waa saldhig cilmi baaris oo qofkasta oo xiisaynaya muusigga caanka ah uu ka heli karo macluumaad. Kaydka waxaad ka heli doontaa waxyaabo ay ka mid yihiin duubitaanno, sawirro, boodhadhyo, duubitaanno fiidiyoow, buugaag iyo xiise u ku saabsan taariikhda muusikada caanka ah ee Iswiidhan.
Horaantii 1990-meeyadii, waxaa jirtay khatar ah in taariikhda dhagaxii hore ee Iswiidhan aan si sax ah loo ilaalin. Shirkado badan ayaa laga iibiyey dibada ama musalafay. Archive-ka loo yaqaan 'Rock Rock Archive' waxaa loo sameeyay si ay u xiiseeyaan muusigga iyo cilmi-baarayaashu inay uga qeyb qaataan taariikhda wareejinta gadaasha dhagaxa iswiidhishka.
Waa suurtagal in lagu dalxiis gaabiyo Rock Archive iyo daawashada noocyo kala duwan oo ku saabsan muusikada caanka ah ee Iswiidhan.
Isniinta: 09–15Talaado: 09–15Arbaco: 09–15Khamiista: 09–15Jimco: 09–15Sabti: Waa xiran yahayAxad Xidhan
Västra Långgatan 46, 577 30 Xaraf, Sverige